LG G3 International ကို Android 6.0 တရားဝင် Firmware မွမ်းမံနည်း | Androidsis
အောက်ဖော်ပြပါလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာတွင်ကျွန်ုပ်အားတဆင့်ချင်းရှင်းလင်းပြသထားသောဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွင်ကူညီပေးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးသတင်း LG က G3 Android 6.0 LG တရားဝင် Firmware မှနိုင်ငံတကာ ပြီးသားရက်အနည်းငယ်ကတရားဝင်ပိုလန်တွင်တပ်ဖြန့်ထားပြီးဖြစ်သည်။
တောင်မှစမ်းသပ်မှု၌ရှိသကဲ့သို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားတစ် ဦး firmware ကိုဖြစ်ခြင်း, ဒီ LG G6.0 International Model အတွက် Android3Marshmallow ကိုတရားဝင် update ပြုလုပ် သို့မဟုတ် D855 မော်ဒယ်များသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပိုင် LG G3 တွင်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်နီးပါးအသုံးပြုခဲ့သည့်တရားဝင် firmware ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ «ဤစာကိုဆက်ဖတ်ရှုပါ», ကျွန်ုပ်သည် Flash Tools များမှတဆင့်တရားဝင် firmware ကို flash လုပ်ရန်လိုအပ်သောဖိုင်များအားလုံးကိုပူးတွဲတင်ပြမည်။ တရားဝင် KDZ နှင့်မှန်ကန်သောတပ်ဆင်မှုနည်းလမ်းကို Flash Tools program နှင့်မျှဝေမည်။
1 နိုင်ငံတကာ LG G3 ကို Android 6.0 Marshmallow သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စိတ်စွဲမှတ်ထားရမည်
2 LG G3 International Model ကို Android 6.0 တရားဝင် LG သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည့်ဖိုင်များ
3 LG G3 နိုင်ငံတကာမော်ဒယ်ကို Android 6.0 တရားဝင် LG သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း
နိုင်ငံတကာ LG G3 ကို Android 6.0 Marshmallow သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စိတ်စွဲမှတ်ထားရမည်
တစ်ဦးရှိ LG G3 နိုင်ငံတကာမော်ဒယ် D855 ထူးခြားတဲ့နှင့်သီးသန့်။
ရှိ USB debugging လုပ်နိုင်ပါတယ် ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ setting ကိုမှ။
ရှိသည် 100 x ကို 100 အားသွင်းဘက်ထရီ
သူတို့ကိုရှိသည် LG ဒရိုင်ဘာများသင့် Windows ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်စနစ်တကျထည့်သွင်းထားသည်, Windows Vista၊ Windows 7၊ Windows 8 နှင့် Windows 10 တို့အတွက်အကျုံးဝင်သည်။
LG G3 International Model ကို Android 6.0 တရားဝင် LG သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည့်ဖိုင်များ
LG G6.0 international အတွက်တရားဝင် Android3update Flash Tools များအတွက် KDZ ကိုဒီမှာနှိပ်ပါ.
မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်အတွက်လိုအပ်သောကိရိယာများ - Flash Tools 2014, Visual C ++, LG Drivers များကိုဒီမှာနှိပ်ပါ။
ပေမဲ့ LG G6.0 အတွက်တရားဝင် ROM သို့မဟုတ် firmware Android3Marshmallow ၎င်းသည်တရားဝင် LG Rom ဖြစ်သည်။ Flash Tools 2014 ၏ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းကို online mode တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် LG ဆာဗာများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်မလိုဘဲ offline ဖြစ်စဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်အလိုရှိသည်။ ငါလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကဖန်တီးခဲ့တဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုလိုက်နာသင့်တယ် Flash Tools ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နှင့် Flashing အသုံးချပရိုဂရမ်ကိုအော့ဖ်လိုင်းအလုပ်လုပ်ရန်မည်သို့ပြုပြင်ရမည်ကိုသင်ကြားပေးသည့်နေရာ။
ထိုနည်းတူစွာမည်သူမဆို tutorial ကိုအော့ဖ်လိုင်းအသုံးအနှုန်းအတိုင်းလိုက်နာရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည့်ဗီဒီယိုတွင်ကျွန်တော်လိုက်သကဲ့သို့ဒီလိုင်းများအောက်တွင်သာထားရှိမည်။ LG G3 ကိုလုံးဝ restart မလုပ်ခင်အထိ application ကရပ်တန့်သွားပြီဆိုတာတောင်မှကမ္ဘာကြီးမှာဘာမှမရှိပါဘူး။.
LG G3 နိုင်ငံတကာမော်ဒယ်ကို Android 6.0 တရားဝင် LG သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G3 International ကို Android 6.0 တရားဝင် LG Poland Firmware ကိုအဆင့်မြှင့်တင်နည်း
122 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
တရားဝင်6ရောက်ရှိသည့်အခါ၎င်းသည်ပြproblemsနာမရှိဘဲ update လုပ်မည်လား။
Antonio Torres ကိုပြန်ပြောပါ
Mavin Yàñez ဟုသူကပြောသည်
အဆင်မပြေမှုအတွက်စိတ်မကောင်းပါ။ ကျွန်ုပ်၌မက္ကဆီကိုတွင်ရောင်းချသော G3 D885p ရှိပြီးသင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းလိုက်ဖက်ပါသလား။
D855p သည် D855 နှင့်တူညီမှုရှိမရှိသင်သိပါသလား။
Juan MB သို့အကြောင်းပြန်ပါ
ခရစ်ယာန် ceron ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ သူငယ်ချင်းကော။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အီကွေဒေါတွင်လက်ရှိရောင်းချသော lg g3 d855p မော်ဒယ်ရှိသည်။ ဤပုံစံသည်သင်ထုတ်ဝေနေသောစနစ်နှင့်လိုက်ဖက်မှုရှိမရှိသိလိုလျှင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Cristian ceron သို့ပြန်သွားပါ
Josue Estrada ဟုသူကပြောသည်
Hi Marvin, ငါတို့ lg « d855p »သည်ပုံမှန် d855 ဗားရှင်းဖြစ်ပြီးစမတ်ဖုန်းမှဘက်ထရီကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုသင်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ငါ Rom ပြောင်းလဲမှုပြproblemနာမရှိဘဲပြုနိုင်ခဲ့သလဲ
Josue Estrada ကိုပြန်ပြောပါ
Antony Nuñez ဟုသူကပြောသည်
lg g3 LS990 ဗားရှင်းတွေကဒီ update ကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံရရှိမလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမကိုစောင့်နေတယ်၊ ​​အဲဒီမေးခွန်းကိုဘယ်နေရာမှာမှရှင်းပြလို့မရဘူး
Pff ငါလုပ်ပြီးပြီ၊ ငါနှစ်ဖက်စလုံးကအမှားတွေကိုကျော်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့်အမှားပြတင်းပေါက်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပိတ်မထားသလဲဆိုတာတောင်မသိသေးဘူး၊ အဲဒါကိုကျွန်တော့်အတွက်မွမ်းမံထားတယ်။ ငါခက်ခဲအချိန်ရှိခဲ့တယ်, ငါမှာလုံးဝအကြံပြုကြပါဘူး။
ငါကထုတ်ပစ်ရန် LG Flasht tool ၏ပြတင်းပေါက်မှထွက်လာပြီ ???? ဘုံအက္ခရာများနှင့်ဆက်သွယ်မှုအမှားသည်လည်းကျွန်ုပ်အားပေးသည်၊ အတော်လေး yuyu ..
ငါနောက်တဖန်ယာဉ်မောင်း installed ပါပြီ။ VC ++ စာကြည့်တိုက်နှင့်အမှားများဆက်လက်ရှိနေသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားမွမ်းမံသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်စတင်သောအခါ၎င်းသည်အဆက်အသွယ်မပြနိုင်သေး။ အမှားများပေါ်လာသည်ဟုပြောသည်။ ငါအခြား PC နှင့်အတူတူပင်ကြိုးစားခဲ့ပြီ။
Shark CP ဟုသူကပြောသည်
ငါ dcel မှာမက္ကဆီကိုက telcel နဲ့အတူငါပြproblemsနာမရှိဘဲ update လုပ်ခဲ့တယ်။ တစ်ခုတည်းသောအသေးစိတ်ကတော့ youtube နှင့် facebook ဗီဒီယိုများကစားရာတွင်အလွန်ရှားပါးသည်။ ကိရိယာကို restart လုပ်ပါ၊ အခြားအရာအားလုံးနှင့်ဘက်ထရီသည်အလွန်ကောင်းသည်။
SHARK CP ကိုစာပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်အစပိုင်း၌မည်သည့်အရာကိုမဆို download ပြုလုပ်၍ မရပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားစိတ်ပျက်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Omar Rey ကိုစာပြန်ပါ
Camilo Peña ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်မှာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဗီဒီယိုများနှင့်အတူတူပင်ပြproblemနာရှိသော်လည်းမည်သည့်စာမျက်နှာတွင်မဆိုဗီဒီယိုများဖွင့်သောအခါကျွန်ုပ်လည်းကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ အဖြေမှာမိုဘိုင်းကိုပြန်ဖွင့်ခြင်းသည်မမျှတပါ၊ အဓိပ္ပါယ်ရှာတဲ့အဖြေနဲ့ရှာပြီ။ ရှာတော့ရှာမတွေ့ဘူး
သင်ခန်းစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ အလွန်အသုံးဝင်သည် = P
ညနေခင်းမှာ LG G3 d851 အတွက်ဒီ Firmware လား။
ဒီမှာများအတွက်အားလုံးမော်ဒယ်များအိုင်တီပိုလန် D855 FOR IS http://lg-phone-firmware.com/
ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ကို android6သို့မွမ်းမံသော်လည်း 4g, 3g နှင့် 2g အချက်ပြမှုများစွာမအောင်မြင်ပါ။ ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သောအရာ
အကယ်၍ အချက်ပြမှုမအောင်မြင်ပါက၊ 21c modem ကို install လုပ်ပါ။
အော့ဖ်လိုင်းနည်းလမ်းလုပ်နိုင်ရန်ထိုအဆင့်များ၌ LGMOBILAPK programdata ရှိဖိုလ်ဒါသည်ပေါ်မလာပါ။ ကျွန်ုပ်တင်သွင်းသင့်သည်။
မက္ကဆီကိုရှိဆဲလ်ဖုန်းတစ်ခုတွင် kdz ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ထားနိုင်မည်နည်း။
ငါအာဂျင်တီးနား LG G3 မော်ဒယ် (D855AR) နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်။ ယခုအရာခပ်သိမ်းသည်ပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်သည် သက်ဆိုင်သူများအနေဖြင့်၎င်းကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်ပြင်ဆင်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောပါသည်။
ဟယ်လူးဝစ္စ၊ ငါအာဂျင်တီးနားပါ။ မင်းဆဲလ်ဖုန်းကိုရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ pc ကိုအင်တာနက်ကနေဖြုတ်လိုက်ရမလား။
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်း၊ မင်းရဲ့မိုဘိုင်းဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့မှာမရှိဘူး၊ မော်ဒယ် d855ar
မင်္ဂလာပါ၊ အာဂျင်တီးနားမှပါ၊ 855ar နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ ၅ မိနစ်လမ်းလျှောက်ပြီး ၁၀ မှတ်မှတ်ပြီးနောက်မှမဆက်သွယ်ပါ
ဟူးလူး မင်းမှာ 855ar ရှိလား ?? အဆင့်မြှင့်တင်မှုအဆင်ပြေလား?
Federico အိုင်ဗင် Vila ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့်မှာ gg ၀ န်ထမ်း ၁၆g gg ရှိတာကြောင့်သင့်ကိုတိုင်ပင်ပါမယ်။ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ android3ပိုလန်၏ Rom သည်ငါ့ကိုအစေခံပါလိမ့်မည်။
Federico Ivan Vila သို့ပြန်သွားပါ
ငါမှာ d855p မော်ဒယ်ရှိပြီးအမေရိကအလယ်ပိုင်းကလာတယ်။ ဒီမော်ဒယ်လ်နဲ့ဒီတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ယောက်တွေ့ပြီလား၊ အဲဒီလိုလုပ်ရင်မိုဘိုင်းဒေတာက lte or 4g ကအစေခံမလား။
ငါသူတို့ဗီဒီယိုထဲမှာပေါ်လာသကဲ့သို့ငါခြေလှမ်းများကိုပြု၏ဒါကြောင့်ငါဗဟိုအမေရိကရှိငါ့ lg g3 D855p အပေါ်အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်, lte / 4g အပါအဝင်အရာအားလုံးစုံလင်သောအလုပ်ဖြစ်တယ်
စာရေးသူရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့သူ့ tutorial ကိုအခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာကူးယူပြီးတခြားသူတွေကိုလုပ်ဖို့အားပေးတယ်။
René Eduardo Tino Gutierrez ဟုသူကပြောသည်
ကီဗင်၊ ဘယ်ဖိုင်ကိုမင်း download ခဲ့တာလဲ ငါသည်ငါ၏ D855P နှင့်အတူ marshmallow မှ update ချင်ပေမယ့်ငါရရှိနိုင်ပါသောဖိုင်များကို Lollipop သာဖြစ်လိမ့်မည်ဟု V20A ဖြစ်ကြောင်းကိုကြည့်ရှုပါ ...
René Eduardo Tino Gutiérrezအားပြန်ပြောပါ
ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဗွီဒီယိုဟာအရမ်းရှင်းပြီးလိုက်နာရလွယ်ကူတယ်။
In-depth ကြံ့ခိုင်ရေး ဟုသူကပြောသည်
မှန်ကန်စွာ Android 6.0 (မက်ဒရစ်, စပိန်) မှ update လုပ်။ မိုဘိုင်းသည် ၀ ယ်ယူသကဲ့သို့ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
အဆိုပါသင်ခန်းစာperfectlyုံအလုပ်လုပ် !! ဒါပေမယ့်ငါ update လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် signal ကိုအများကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်၊ 2G, 3G or LTE ဒေတာကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်ဖို့အချိန်ယူရတယ်။ တခါတရံတွင်၎င်းသည်မည်သည့်အရာနှင့်ချိတ်ဆက်မှုမရှိပါသနည်း။ သို့မဟုတ် Lolipop နှင့်ထပ်မံထားရန်နည်းလမ်းလား?
အောင်မြင်စွာ Android 6.0 (Misiones, Argentina) သို့အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပြီ။ မိုဘိုင်းသည် ၀ ယ်ယူသကဲ့သို့ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ Diego၊ သင်မွမ်းမံနိုင်ခဲ့သောကြောင့်အာဂျင်တီးနား၏ lte (4g) ခန္တာကိုယ်များသည်ဤမွမ်းမံမှုနှင့်အတူပါ ၀ င်ပါမလား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော့်ရဲ့ g3d855 ကဒီမှာ 4g ကွန်ယက်တွေအတွက်သဟဇာတမဖြစ်သေးလို့ပါ။
ဟုတ်တယ်။ 4g ကကောင်းတယ် ဒါဟာငါ့ကိုဒရာမာမပါဘဲယူခဲ့ပါတယ်။ သငျသညျစာမျက်နှာကနေတဆင့်တောင်းခံရန်ရှိသည် .. ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြုလေ၏။ သူတို့ကငါ့ကိုဆဲလ်၊ ဒေတာနှင့်အခြားသူများကို configure လုပ်ဖို့မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ကြောင်း။ မက်ဆေ့ခ်ျများကိုလက်ခံပါ။ ဖုန်းကို restart လုပ်ပါ။ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ငါ ၀ ယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘက်ထရီကကြာရှည်ခံပါတယ်။
Diego မှဥစ္စာတစ် lg g3 d855ar ပါသလဲ ငါ့မှာပုံစံရှိတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ LG G3 D855AR ရှိတယ်၊ အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံရဲ့လား။ ဒေတာကွန်ယက်လား။ မင်းမှာဝန်ထမ်းရှိလား
မင်္ဂလာပါ၊ အာဂျင်တီးနားတွင်သင် 4g ရှိရန် band များကို unblock လုပ်ရမည်။
Dieg martin ဟုသူကပြောသည်
ဒီယေဂို (သို့) D855AR ဖြင့်ပြုလုပ်သူမည်သူမဆို၊ ဒီဗားရှင်းသည် FM ရေဒီယိုကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုပါသလား။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဒါဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကကျွန်တော့်ကိုဒီဆဲလ်ဖုန်းကို ၀ ယ်လိုက်တာပါ။ အများစုကမပြီးသေးပါဘူး။
Android 6.0 တွင် knock ကုဒ်ကိုမည်သို့ disable လုပ်ရမည်ကိုမည်သူမဆိုသိသည်
Diego မှဥစ္စာတစ် lg g3 d855ar ပါသလဲ ငါ့မှာပုံစံရှိတယ်။
ဟုတ်တယ်။ ဒါဟာအတူတူ d855 ar ဖြစ်ပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါပြီးသားလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ငါကဖျက်ဆီး။ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်
ငါဒါလုပ်လို့မရဘူး၊ installation ထဲမှာအမှားတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာတွင်မည်သည့်အရာများရှိမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ဥပမာဥပမာအားဖြင့် SW ကို Update လုပ်ရန်ရွေးစရာသည်တစ်ခါမှမပေါ်လာပါ။ ယခုကျွန်ုပ်လည်း၎င်းနည်းကိုမွမ်းမံနိုင်ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား
အကြံဥာဏ်။ ပထမ ဦး စွာ usb debugging mode ကိုထည့်ပါ။ D x file ကိုစတင်ပါက driver များကို install လုပ်၍ nomas ပေးပါ။
အဖြေပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်သည် developer mode ကိုမ ၀ င်နိုင်ပါ။ ၎င်းကိုထပ်ခါတလဲလဲနှိပ်သောအခါ "မလိုအပ်ပါ၊ သင့်တွင် developer ရှိပြီးသားဖြစ်ပါစေ"
သင် configuration ကိုသွားပြီးဖုန်းအကြောင်း၊ software information ကိုနှိပ်ပြီး compiler number ကိုသင် ၇ ကြိမ်နှိပ်ပါ။ ၎င်းသည်ဖုန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး developer option ကိုဖွင့်နိုင်သည်။ ထိုအခါသင်သည် USB debugging ကို enable ။ ဒါပါပဲ။ မင်းကိုအစေခံမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်မလုပ်နိူင်ပါ။ ကျွန်ုပ်ကလစ်နှိပ်လျှင်မည်မျှအကြိမ်ကလစ်နှိပ်သည်ဖြစ်စေ“ မလိုအပ်ပါ၊ သင့်တွင်ရေးသားသူရှိပါလိမ့်မည်။ your သင့်ရဲ့အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့အားသင် enable လုပ်ထားပြီးပြီ ဖြစ်၍ Settings သို့သွားပြီး Development Options (သို့) Advanced Settings ဟုခေါ်သည့်ကဏ္ new သစ်ကိုရရန်သင်လိုအပ်သမျှ၏အောက်ခြေတွင်ရှိသည်။
ဟင်ချီကို၊ ငါအဲဒါကိုမွမ်းမံဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ အမှားတစ်ခုချခဲ့တယ်၊ ငါ့ကိုခွင့်မပြုဘူး၊ ဘာဖြစ်နိုင်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Haku sama ဟုသူကပြောသည်
Haku Sama သို့ပြန်သွားပါ
ငါ့ဖုန်း lg g3 d855p ဒီအခန်းကိုတပ်လို့ရသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ပြproblemsနာမရှိတဲ့ d855ar ပေါ်မှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၅ မိနစ်အကြာတွင်အခြား d5ar တွင်ပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းပျက်ကွက်သည်။ ငါသတိထားမိသည့်တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်မှာ - ပထမ g855 သည် Lollipop လည်နေသောစက်ရုံမှလွတ်ခြင်းဖြစ်သည် ဒုတိယ၊ ပျက်ကွက်မှုသည် movistar AR မှဖြစ်ပြီး KitKat ရှိသည်။ သူက KitKat မှာကျရှုံးနေလို့ပါ။ ငါ update ကိုပျက်ကွက်သောပြproblemနာမှန်လျှင်အတည်ပြုရန်ထပ်ကြိုးစားပါ။ Slds !!
ငါ့မှာ movistar ကနေထွက်လာတဲ့ပုံစံတူတူရှိတယ်၊ အဲဒါ kiktkat ကနေ loli tranki အထိအဆင့်မြှင့်တယ်။ ပြPCနာမပြေလည်ဘဲ LG PC SUITE မှတစ်ဆင့်။ ငါ android 6. Greetings နှင့်အတူမျှော်လင့်ပါတယ်တူညီသော။
မင်္ဂလာပါ၊ ခင်ဗျားဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ အဆင့်မြှင့်တင်မှုပရိုဂရမ်ကိုမလုပ်ဆောင်မီ lg drivers များကိုထည့်ပါ။ ဒါကကျွန်တော့်အတွက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ငါ druvers ကို install လုပ်လိုက်တယ်။ သူကပြproblemsနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ အက္ခရာတွေ၊ မေးခွန်းသင်္ကေတတွေအစားကျွန်တော်ပေါ်လာတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာ၊ ဒါပေမယ့်ငါအဲဒါကိုလျစ်လျူရှုခဲ့တယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ အားလုံးပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမိုဘိုင်းကွန်ယက်ကိုအမှားတစ်ခုလုပ်နေတယ်။ မင်းမှာဖြေရှင်းနည်းရှိလား။ မိုဘိုင်းဒေတာနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်သို့မဟုတ်အချိန်ကြာမြင့်စွာမယူပါဘူး။
ဟိုင်ဂျာဗီ၊ မင်းဘယ်ကွန်ယက်ရှိသလဲ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလား။
အဘယ်သူမျှမက AT & T ကမက္ကစီကိုပါပဲ
ငါနည်းနည်းပြproblemနာရှိတာကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ ငါလိုက်နာရမယ့်အဆင့်တွေအားလုံးကိုလုပ်ခဲ့ပြီးကောင်းပါပြီ။ ဗားရှင်း 6.0 ကိုကျွန်ုပ်၏ terminal ထဲမှာပြသနာမရှိဘဲထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကင်မရာကိုသုံးချင်ရင်အဓိကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ ပြီးတော့ flash ကလဲအမှားတစ်ခုပို့ပေးပါတယ်။ system သို့မဟုတ် terminal? .. ငါ application ရဲ့ cache ကိုရှင်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါအပြောင်းအလဲမရှိဘူး။ master reset လုပ်ပြီးကင်မရာကအတူတူပဲဖြစ်နေတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ငါထပ်ထပ်ပြီးထပ်တူထပ်တူပြproblemနာရှိနေသေးတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ငါ terminal ကို disarm လုပ်လိုက်ပြီးကင်မရာရဲ့ ping ဟာ ​​Motherboard ကနေလွတ်သွားပြီလား၊ ဒါပေမယ့်ဖြေရှင်းနည်းကအတူတူပဲဖြစ်နေသေးလားဆိုတာသိဖို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဖော်ပြပေးထားသည့်အတိုင်းကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားပြီး ၁၀၀% အလုပ်လုပ်သည်… LG G100 D3P CLARO COLOMBIA …
ဟယ်လူဝီ, အရာအားလုံးဒဏ်ငွေဆက်လက်? ငါ android6သို့ပြောင်းရန်ရည်ရွယ်ထား, သင်ကအကြံပြုပါသည်
ငါအရာအားလုံးကိုကောင်းစွာ install လုပ်တယ်၊ ကျရှုံးတာတစ်ခုကရှေ့ကင်မရာကငါ့ကိုအသိအမှတ်မပြုတာဒါမှမဟုတ်ကင်မရာကိုနောက်ကင်မရာကသာအမြဲတမ်းရှိနေစေတာပဲ။
ဟိုင်း၊ ငါ Gabriel၊ ကျွန်ုပ် lg g3 d855 တွင်၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်မိုဘိုင်းဒေတာအိုင်ကွန်သည်ကျွန်ုပ်ကိုအသက်မရှင်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ 3g နှင့် 4g သည်၎င်းကိုပိတ်ထားလိမ့်မည်။ ငါ install လုပ်သည့်အခါရှင်းပြသည်အတိုင်းငါခြေလှမ်းဖြတ်သန်း
Roberto Castaneda ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤသင်ခန်းစာကြောင့်ကျွန်ုပ် LG G3 D855AR ကို Marshmallow သို့မွမ်းမံနိုင်ခဲ့သည်။
LG အာဂျင်တီးနား၏အဆိုအရ Marshmallow သည် PC-Suite မှတစ်ဆင့်တရားဝင်ရောက်ရှိရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Alejandro, ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ၊ အာဂျင်တီးနားမှလည်းငါ Lg G3 ကိုအဆင့်မြှင့်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ပြ,နာက 3G, 4G နဲ့အတူပြorနာတစ်ခု (သို့) ပြfailureနာရှိတာကိုငါကြောက်နေတယ်။ ဒါကဘာလဲ အများကြီးငါ့ကိုလုပ်ဖို့ငါ့ကိုမအားပေးပါဘူး ငါ့ကိုနည်းနည်းပြောပြပါ၊ သင်မွမ်းမံမှုကိုဘယ်လိုလုပ်သလဲ။ မင်းကုမ္ပဏီမှာဘာရှိလဲ
Pocholo, နေကောင်းလား ငါဆိုသည်ကားငါကွန်ယက်များပြwithနာနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမပြproblemနာရှိခဲ့ကြောင်း, အရာအားလုံးအရင်ကကဲ့သို့ဆက်လက်။ ကျွန်ုပ်၏ G3 သည်အခမဲ့ ဖြစ်၍ Claro နှင့်သုံးပါသည်။
update နှင့်အတူ, interface အတွက်တိုးတက်မှုများအပြင်, အထွေထွေစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အလွန်ကြီးစွာသောတိုးတက်မှုလည်းရှိပါတယ်။
ကျွန်တော့် lg g6 မှာ android3ကို install လုပ်ပြီးပါက pc suite နဲ့မဆက်သွယ်တော့ပါ။ ဘာကြောင့်လဲသိလား။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ဝေမျှလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Firmware ကိုပြောင်းဖို့ကျွန်တော့်ကိုအားပေးပါ။ အားလုံးပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ အာဂျင်တီးနားက interface နဲ့ဒီဇိုင်းသစ်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ် (LG G3 D855AR မှာထည့်သွင်းထားပါတယ်) ကျေးဇူးတင်ပါသည် GENIOOO ..
ငါအကြောင်းအရာအတွက်လေ့လာသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်၊ ငါအာဂျင်တီးနားမှဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင် LG G3 D855 AR ရှိသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ မေး - ကျွန်ုပ်သည် Android 6.0 Marshmallow သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းမရှိသေးပါ၊ ကျွန်ုပ်ဘာမှမထိပါ။ ဆိုလိုတာကကျွန်ုပ်မှာ၎င်းမှာမရှိ၊ အမြစ်တွယ်နေတယ်၊ ​​လန်းနေတယ်၊ ​​ကျွန်ုပ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်နိုင်သလားဒါမှမဟုတ်အခြားလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကို ဦး စွာလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
Adrian giraldo ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် ၆.၀ သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးအဆင်မပြေပါကကျွန်ုပ်သည် 6.0 သို့ပြန်သွားနိုင်ပါသလား။
Adrian Giraldo သို့ပြန်ပြောပါ
Yanina ဆာဘ ဟုသူကပြောသည်
ဟင် Adrian ဟင်၊ မင်း Lollipop ကိုပြန်လို့ရမလားသိလား ကျွန်တော်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမဖွင့်ခင်သိချင်ပါတယ်
Yanina Saba အားပြန်ကြားခြင်း
Andrew AVILA ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ LG G3 သည် android 4.4.2 ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လှည့်နေပါသည်။ အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။
ANDRES AVILA သို့ပြန်ပြောပါ
ရှောလု minota ဟုသူကပြောသည်
လူတိုင်းကိုမင်္ဂလာပါ၊ ၆.၀ သို့အဆင့်မြှင့်ပါ။ အဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော် Virgin နှင့် ETB ကိုလံဘီယာတို့တွင်အဆင်မပြေသော်လည်းအချက်အလက်များအဆင်မပြေပါ။ မည်သူမဆိုအဖြေတစ်ခုသိလျှင်၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Saulo Minota အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါကျွန်ုပ်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်မှာ LG G3 STYLUS D693N ကျွန်ုပ်ဘယ်လိုအမြစ်တွယ်နေသလဲ
Ana Llely Hdez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်မှာ LG G3 D855P ရှိပါတယ်။ Android 6.0 Marshmallow ကို update လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခံရပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ပျက်စီးသွားမှာကိုကျွန်တော်ကြောက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးကဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်၊ ​​အရာအားလုံးမှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လုပ်ပုံကိုကြိုက်တယ်၊ ငါပြီးသား2ရက်ပိုပြီးပါပြီကြောင့်ငါ့ကိုပြproblemsနာများမပေးပါဘူးကြောင်းဖော်ပြ။ ဤသတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Ana Llely Hdez အားပြန်ပြောပါ
ဒီ rom ကိုမီးမောင်းထိုးပြတော့မယ်။ မိုဘိုင်းကွန်ယက်တွေအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာကိုကြောက်တယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကသူဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြတယ်၊ ငါ့မော်ဒယ် d855ar, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သင်အဲဒါကိုမွမ်းမံပြီး၊ ဒေတာကသင့်ဆီကိုသွားခဲ့သလား။ ငါသည်လည်း update လုပ်ဖို့အကြောင်းပါသေးတယ်ဒါပေမယ့်ငါမသိဘူး
ဟုတ်တယ်၊ ငါဒါကိုအဆင့်မြှင့်လိုက်ပြီ။ ပထမအဆင့်သွားတယ်။ မိုဘိုင်းဒေတာအားလုံးပြီးပြည့်စုံတယ်။ ဘက်ထရီကလည်းကြာရှည်ခံတယ်။ ငါ့ရဲ့အရာဝတ္ထုတွေမဖျက်နိုင်အောင်သာမန် flash ကိုသာရွေးခဲ့တယ်။
မေးခွန်း - ကျွန်ုပ်တွင်အာဂျင်တီးနားမှ lg G3 D855AR ရှိသော်လည်း ၁၆ gb တစ်ခုရှိပါကပိုလန်မှ rom သည်ဒီ terminal တွင်အလုပ်လုပ်မည်လား။ ဒီအကြောင်းငါ့ကိုအကြံပေးနိုင်သူတစ် ဦး, တန်ဖိုးထားသည်။
Javier C ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ Federico Ivan Vila၊ မှတ်ချက်များအားလုံးကိုဖတ်ရန် ၂ မိနစ်အချိန်ယူပါက D2AR တွင်ယခင်အတွေ့အကြုံများရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့အားလုံးအောင်မြင်သည်ဟုသင်မြင်လိမ့်မည်။ ကြိုးစားသူအားလုံးသည်သင်ခန်းစာကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ပြီး၎င်းသည်ဖုန်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်နှင့်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြnoနာမရှိကြောင်းပြန်လည်တင်ပြခဲ့သည်။ မနက်ဖြန်ငါ G855 အသစ်ရတဲ့အခါငါ update ကိုငါလုပ်မယ်။
Javier C. ကိုပြန်ပြောပါ
အဆိုပါအမြင်အာရုံ for များအတွက်တစ် ဦး က query ကို?
ငါအရာရာတိုင်းကိုပြီးအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် Netflix ကိုကြည့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါပြproblemနာပေါ်လာတယ်။ သင်ဝတ်တာပဲကအနက်ရောင်ပါ။ လျှောက်လွှာနှင့်ဝဘ်ပေါ်တွင်နှစ် ဦး စလုံး! ပိုလန်နိုင်ငံတွင် Netflix မရှိသောကြောင့် DNS ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုအချို့ကပြောကြသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြုပြင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် D855AR ကိုအဆင့်မြှင့်ခဲ့ပြီး ၄ င်းကကျွန်ုပ်အားအသိအမှတ်မပြုပါ။ ၎င်းသည်ကွန်ယက်ကိုအသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တွင်အချက်ပြမှုမရှိပါ။ Lollipop version 5.0 သို့ပြန်ပို့ရန်ကျွန်ုပ်မတတ်နိုင်ပါ။ မည်သူမဆိုဤပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်မည်သို့သိသနည်း။
Franco - ပြuserနာတူညီတဲ့အခြားသုံးစွဲသူတ ဦး ရဲ့စာကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါ၊ သင့်ရဲ့ပံ့ပိုးသူရဲ့စာမျက်နှာ (ဥပမာအားဖြင့် www.personal.com.ar) တွင်သင်၏အကောင့်ကိုထည့်ပြီးကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းမှုကို SMS မှသင့်ထံပေးပို့ရန်တောင်းဆိုရမည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် LG G3 ဟာဒီ update နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိ၊ မရှိသိချင်တယ်။ သတ္တုတွင်းကိုလက်တင်အမေရိကအာဂျင်တီးနားတွင်ရောင်းချသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ D855-AR ။
ဒါကို eduardo မွမ်းမံနိုင်မလား?
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး AR ။ LG G3 D855AR အချက်ပြပြORနာများ မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာမျှမပါဘဲအကောင်းဆုံးသောအရာအားလုံးသည်၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သည်။ ၂ ရက်နောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့်အိုင်တီသည်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
မင်္ဂလာပါ jalaway75 ခင်ဗျားကို Netflix ကိုကောင်းကောင်းကြည့်နိုင်မလားမေးချင်လားဗွီဒီယိုတွေကိုကြည့်လား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏စာကို matiasonboardarrobagmail.com သို့ပြန်ပို့ပါ
CloudyG8553ပါသော D2.5-AR အတွက် update မပြုလုပ်မှီ application / conversations / whatsapp / etc ၏အချက်အလက်များအတွက်မည်သည့် backup လုပ်ရန်နည်းလမ်းကိုသင်အကြံပြုသနည်း။
Alejandro Espinosa ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းသူငယ်ချင်းများကျွန်ုပ်သည်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်မှာ LG-D855P ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးပေါ် android ဖုန်းသို့အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်သည်။ အရာရာတိုင်းပြီးပြည့်စုံနေသည်။ သူငယ်ချင်းများကကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုဖုန်းဆက်သောအခါ၎င်းသည်အသံပိတ်နေသကဲ့သို့အသံမထွက်ဟုပြောသည့်အချိန်အထိကျွန်ုပ်အလွန်ပျော်ခဲ့သည်။ ငါအကြိမ်အနည်းငယ်ခေါ်ရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းပြproblemနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုသိသည်၊ ပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုတွင်ရှိနေသောအခြားအချိန်များ၌မူကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
Alejandro Espinosa အားပြန်ပြောပါ
Sandro Ysabel Arraiza Llacsahuache ဟုသူကပြောသည်
စိတ်လှုပ်ရှားစရာ, ဒီသင်ခန်းစာကငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်၊ ငါလုပ်ခဲ့တယ်၊ အဲဒါကအရမ်းကောင်းတယ်၊ စာရေးတာကိုငါခဏမွမ်းမံချင်တယ်၊ ဘယ်သူမှငါ့ကိုမကူညီနိုင်ဘူး၊ ငါကိုယ်တိုင်ဒီသင်ခန်းစာကြောင့်ငါစီမံခန့်ခွဲခဲ့တယ် ကြောက်မက်ဖွယ်စာရေးဆရာမှကျေးဇူးတင်စကားပြန်လုပ်ပါ
Sandro Ysabel Arraiza Llacsahuache အားပြန်ကြားပါ
matias pepe ဟုသူကပြောသည်
d855ar မော်ဒယ်လ်နှင့်အတူမည်သူမဆို netflix နှင့်ပတ်သက်။ ငါ့ကိုကဲ့သို့ပြproblemနာရှိခဲ့ ??? သင်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြည့်ရှုနိုင်မလား ??? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဖြေကိုစောင့်နေပါတယ်၊ ၃ လအတွင်းကျွန်တော်မေးခဲ့တဲ့တတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်
matias pepe အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ။ XDA တွင်ကျွန်တော်တွေ့ရှိသောအချက်အလက်များကိုပုလဲကဲ့သို့ကျွန်ုပ်အားထားခဲ့ချင်သည်။ သူသည် Android M ပေါ်ရှိ Netflix ဗီဒီယိုများမတင်သောကြောင့်တစ်ယောက်ယောက်ထပ်တူဖြစ်ခဲ့လျှင်
လိုက်နာရမည့်အဆင့်များမှာလွယ်ကူပါသည်။ system system / vendor / lib တွင်ရှိသော system ဖိုင်ကိုဖျက်ပစ်ရန် root ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ liboemcrypto.so file restart ကိုဖျက်ပြီး၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သည်။
မင်္ဂလာပါ Juan Manuel ဘာကို download လုပ်ချင်လဲ။
Emanuel Teseira ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ပိုလန်မှမော်ဒယ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်မည်သည့်တိကျသောမော်ဒယ်လ်လဲကျွန်ုပ်မှာ 3gb lg g855 d16 ရှိတယ်၊ ဘယ်တစ်ခုကို download လုပ်ရမလဲ။
Emanuel Teseira အားပြန်ပြောပါ
ပထမအချက်အနေနဲ့၊ ဒီမျှဝေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည် d855AR တွင် Custom ROM များကိုတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားခြင်းကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောစက်ရုံသည်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုဖမ်းမိသောအမှားတစ်ခုမှာ Micro SD နှင့်ပတ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်၌ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်း ရှိ၍ ၎င်းမှာပြသနာမရှိခဲ့ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် PlayerPro မှဂီတကိုနားထောင်နေစဉ်နောက်ဆုံးသတင်းများအပြီးတွင်မှတ်ဉာဏ်သည်သူ့ဟာသူနှင်ထုတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်မသုံးနိုင်ပါ။ ငါအတွင်း၌တစ်ခုခုကူးယူရန်ကြိုးစားသောအခါသူကသူ့ဟာသူအဆက်မပြတ်ထုတ်ယူနှင့်ငါက PC ပေါ်မှာစမ်းသပ်လျှင်, သူကworksုံအလုပ်လုပ်သည်။ တခြားအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးသောအမှတ်တရများ (ကျွန်ုပ်တွင် 32Gb တစ်ခုနှင့် 8Gb တစ်ခုကြိုးစားသည်) ကိုလည်းငါရွေးချယ်မှုများမှ ၀ င်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါဖုန်းကိုစစ်ဆေးသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ `ကံမကောင်းစွာ com.android.settings လုပ်ငန်းစဉ် ရပ်လိုက်ပြီ
အဲဒါကိုဖြေရှင်းဖို့အကြံဥာဏ်တစ်ခုခုကိုမင်းစဉ်းစားလို့ရသလား။ ငါအင်တာနက်အများကြီးရှာဖွေနေပေမယ့်ဘာမှမအလုပ်လုပ်ဘူး၊ ငါအမြစ်တွယ်ပြီးသင်ပြန်လည်မျှဝေခဲ့တဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတယ်၊ ဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းသွားပေမဲ့ Micro SD ကနေဒါကိုကျွန်တော်မဖြေရှင်းနိုင်ဘူး၊ ငါလမ်းပေါ်မှာနေပြီးဂီတဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်လာတယ်။
ဟိုဆေးအန်ဒရက် Sanabria ဟုသူကပြောသည်
၁၀ မိနစ်တောင်မပြည့်ဘဲပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
JoséAndrés Sanabria ကိုပြန်ပြောပါ
ချစ်ခင်ရပါသော, သင်သည်ငါ့ကို microsd ၏မော်ဒယ်ပြောပြရန်တစ် ဦး မျက်နှာသာပြုပါလိမ့်မယ်နှင့်သူကပြproblemsနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်? ငါ updated ကတည်းကငါငါ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ထုတ်ယူခဲ့ကြသည်။ Netflix သည်သင့်အတွက်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်သည်ဆိုပါစို့လား။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုအမြဲတမ်းအားသွင်းနေတယ်။ ပြီးတော့ငါအရင်ကမရှိခဲ့တဲ့ပြproblemsနာနှစ်ခုပဲ။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ!!!
Jefferson Andrew ဟုသူကပြောသည်
jefferson andres သို့ပြန်သွားရန်
အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံသော၊ ၎င်းသည် 100% အရာအားလုံးကိုဗီဒီယိုနှင့်ပြproblemsနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်သည်။
ဒီလင့်ဟာနှိမ့်ထားပြီ၊ ပြန်တင်လို့မရဘူးလား။ ကျေးဇူးပြု
Ruben Alfonso ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းသူငယ်ချင်း၊ ငါ marshmallow ကိုတပ်ဆင်ချင်တယ်။ ဒီပိုလန်ဘာသာပြန်ကျမ်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗားရှင်းအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ
Rubén alfonso အားစာပြန်ပါ
ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာအခမဲ့ဂိမ်းကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Parkour ကိုသင်၏ Android တွင်ခံစားပါ
Xiaomi Mi5 ၏ပုံရိပ်အသစ်များကိုစစ်ထုတ်သည်